mairie-antananarivo – FANOKAFANA NY TRANOM-BAROTRA ARY FANALANA IREO MPANOFA TRANO
Taorian’ ny fanakatonana ny «propriété FAHRI » teny Behoririka ny Alatsinainy faha 17 Oktobra 2016 ; tamin’ny alalan’ny ARRETE MUNICIPAL N°129 – CUA/CAB.16 ; dia niverina teny an-toerana indray ny avy ao amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ; izay nahitana : ny DAJC (Direction des Affaires Juridiques et Contentieux) , ny DTP (Direction des Travaux Publics), ny Polisy Monisipaly ary Polisy Nasionaly ; mba hanokatra ny trano ary hanala ny mpanofa trano sy ireo entam-barotra mbola tavela tao tamin’ny alalan’ny Ordonnance n° 11 188 du 16 Novembre 2016 ny Talata faha 03 Janoary 2017.
Marihina fa ny antony nanakatonana ity trano iray ity dia noho ny rindrina mitriatra sy mando lava, ny fantson-drano tsy afaka ampiasaina intsony, ny tafo simba, tsy fanarahana ny fenitry ny « code de la santé publique » ka izany rehetra izany dia mety hitera-doza hoan’ny manodidina.
Tamin’ny fotoana nanokafana ny trano sy ny fanalana ny entana androany 03 Janoary 2017, dia naka ny entany koa ireo mpanofa. « Rehefa vita ny famoahana ireo entana ireo dia hidin’ny vadin-tany indray ny trano ary afaka manaraka ireo antanan-tohatra amin’ny fanamboarana ny trano amin’izay ny tompon’ny trano ». Tsy afaka misokatra ny tranom-barotra raha tsy tomombana avokoa ireo fepetra izay nangatahan’ireo tompon’andraikitra avy ao amin’ny fiadidiana ny tananan’Antananarivo.
AO ANATY » Fifamoivoizana, Kaominina